Ukujongwa koontanga- iAfricArXiv
Xa u luvavanyo lomsebenzi olwenziwa ngumntu omnye okanye nangaphezulu ngabantu abanezakhono ezifanayo njengabavelisi bomsebenzi (oontanga). Isebenza njengohlobo lokuzibamba kumalungu afanelekileyo obuchwephesha kuwo Kwintsimi. Iindlela zovavanyo lontanga zisetyenziselwa ukugcina imigangatho esemgangathweni, ukuphucula ukusebenza, kunye nokubonelela ukuthembeka. In nezifundiswa, uphononongo loontanga ihlala isetyenziswa ukumisela i iphepha lemfundoUkulungela ukupapashwa.
Ukusuka kwiWikipedia, EN.wikipedia.org/wiki/Peer_review
Imvavanyo kunye nokuphononongwa koontanga
Umbhalo wesandla woshicilelo yinguqulelo yombhali wenqaku kwaye uhlala ungeniswa kwiphephancwadi ukuze uphononongwe ngoontanga. Ngokwesiko, ibhodi yokuhlela yejenali inoxanduva lokunxibelelanisa inkqubo yoqwalaselo.
Iinkqubo zokuphononongwa koontanga ziyahluka phakathi kokungaziwa okanye 'ukungaboni', ukuphinda kabini ukungaboni kunye nokujonga okuvulekileyo koontanga kwaye kuxhomekeke ekubeni umbhali kunye nombuyekezi bayazi malunga nokuba ngubani okanye hayi kwaye ukuba ingxelo yokuphononongwa iyafumaneka esidlangalaleni okanye kuphela kwibhodi yokuhlela Ijenali kunye nombhali.
Namhlanje, iindlela ezahlukeneyo zokuphononongwa koontanga zikho ezinye esizibeka apha. Abanye be bethu qabane ukubonelela ngeenkonzo ezibandakanya okanye ukubonelela ngeziseko zedijithali zesichazi-magama kunye nokuphononongwa koontanga kwincwadi yakho ebhaliweyo.
Ukufumana okanye ukunika ingxelo kumbandela owubanjelwe kwiqonga le -AfreAXiv sicebisa ezi zinto zilandelayo:
Amanqaku okuhlola abahlali kwi Jonga kwakhona
I-preREview's mission kukuzisa iyantlukwano ngakumbi kuphononongo loontanga ngokuxhasa kunye nokuxhobisa uluntu lwabaphandi, ngakumbi abo bakwizigaba zokuqala zomsebenzi wabo (ECRs) ukuphononongwa kwangaphambili.
Kwi-PREreview sikholelwa ukuba bonke abaphandi kufuneka bavunyelwe ukunceda abanye ngokujonga kwakhona umsebenzi woontanga babo, ukuba nje wenziwe ngokwakha.
Ukuqeqesha abaphandi ukuba banike ingxelo eyakhayo
Ngokudabukisayo, ngelixa uphononongo loontanga luyinto ephambili ekusasazeni isayensi, bambalwa kakhulu abenzululwazi abafumana naluphi na uqeqesho olusemthethweni kulo.
Funda ngaphezulu ku Umxholo.prereview.org/about/
Ngenisa umbhalo obhaliweyo wokuqala wakho ku I-PeerCommunityIn
Uluntu loontanga kwi… (PCI) ngumbutho wesayensi ongenzi nzuzo ozinze eFransi ojolise ekudaleni iindawo ezithile zabaphandi abahlola nokuphinda babhengeze, izinto zasimahla ezingashicilelwanga kwintsimi yabo.
I-PCI ibonelela ngenkqubo yasimahla yokucebisa yamabinzana asayensi ashicilelweyo (kunye namanqaku ashicilelweyo) ngokusekwe kuhlolo loontanga.
Ngenisa umba wokuqala kwi-PCI wokuphononongwa (kwenziwa kanjani).
Abacebisi nge-PCI banayo Iintsuku ezingama-20 zokuthatha isigqibo kwilungelo lakho lokuqala.
Nje ukuba uphathwe ngumnxibelelanisi, ilungelo lakho lokuphononongwa liqwalaselwa kwakhona ubuncinci abavavanyi.
Uyamkela uphononongo kunye nezimvo zomcebisi ukulungiselela i Inguqulelo ehlaziyiweyo yeprint yakho.
I-PCI ibonelela itemplate Umbhali ulungisa ingxelo yokugqibela yenqaku elinee-logo ze-PCI kunye nesalathiso sengcebiso.
Iingcebiso kunye neengxelo zovavanyo zipapashwa kwiwebhusayithi yePCI. Inguqulelo ye-pdf yengcebiso ye-PCI kunye neengxelo zokuhlolwa zingagcinwa ngumbhali njengoko izinto zokwengeza.
Iingcebiso ze-PCI zommeli wokuqala zifumana a Crossref DOI edityaniswe kwingxelo yokuqala ye-intanethi.
Hlaziya ingxelo yakho yokuqala kwiplatifomu ye-KiaArXiv kubandakanya ingcebiso ye-PCI.
Umbhalo ophakanyisiweyo usenokufakwa kwijenali. Funda ngaphezulu ku peercommunityin.org/pci-obuhlobo-journals.
Chaza imibhalo yangaphambili Iimpawu.is
Usetyenziso lwebrowser kunye neebhukumaki Iimpawu.is Yenza ukuba inqanaba lokuthatha amanqaku okanye ukugxekwa kweendaba, iibhlog, amanqaku ezenzululwazi, iincwadi, imigaqo yenkonzo, amanyathelo okuvota, umthetho nokunye.
Ngamanye amaxesha ekubhekiswa kuyo 'njengophononongo lwontanga' unokufunda kwaye uchaze imibhalo ebhaliweyo eyamkelweyo nakweyiphi na iqonga lamaqabane usebenzisa iHypothes.is- nokuba yeyakho okanye yenza izichazi-magama zakho zibonakale kwabanye abasebenzisi beHypothes.is.
Iiprinta ze-OSF kuquka I-AfricArXiv / OSF kunye nezinye iinkonzo zoluntu zokuhlangana Iimpawu.is ukwenza amanqaku aphezulu esidlangalaleni kunye neenkcazo zifundwe kwiPDP kuye nakubani na.
Funda ngaphezulu ku nceda.osf.io/ ......Ankhathaleli-a-Preprint kwaye iwebhu.hypothes.is/search/.
Hlaziya esidlangalaleni nayiphi na inqaku kwi ScienceOpen
ScienceOpen liqonga lokufumanisa elinemisebenzi edibeneyo yabaphengululi ukongeza uphando lwabo kwindawo evulekileyo, benze impembelelo, kwaye bafumane udumo ngako.
Nika okanye ufumane uphononongo lontanga olusemthethweni ngalo naliphi na elinye amanqaku angaphezulu kwezigidi ezingama-60 zophando kunye neerekhodi ezikwi-intanethi kwiqonga leSayensiOpen. Funda ngakumbi kwi malunga.scienceopen.com/peer-review-guidlines/.
Via the I-AfricaArXiv Preprints ingqokelela kwi ScienceOpen Kuyenzeka ukuba ababhali bacele abanye abaphandi ukuba babonelele ngovavanyo lontanga olusemgangathweni kumbhalo obhaliweyo ngokuthe ngqo kwiqonga leSayensiOpen. Funda ngakumbi kwi scienceopen.com/collection/SOPreprints
Isikhokelo sokuziphatha soPhononongo loontanga
Ukuqinisekisa ukuthembeka kweerekhodi zezifundo kunye nokwenza lula uphononongo olungaguqukiyo, nolungenaxesha elifanelekileyo, sicebisa ukulandela izikhokelo zeBhunga le-COPE kubahlaziyo bontanga, ezinokuthi zifikeleleke shicileloethics.org/files/Ethical_Guidlines_For_Peer_Reviewers.pdf
Ukufumana ukwamkelwa esidlangalaleni malunga nokuhanjiswa kwezabelo unakho
faka ingxelo yokuphononongwa kwiAfrikaArXiv emva kopapasho lomsebenzi ophononongiweyo ngababhali.
yongeza i-DOI yenqaku elishicilelweyo njengereferensi
qinisekisa ukuba abahleli bejenali kunye nababhali bayavuma
bhalisa uphononongo e Iicaplons.com.
Kwimeko yayo nayiphi na imibuzo malunga neendlela eziqhutywa ngabahlali zokujonga ezinye iindlela zokushicilela ngesandla qhagamshelana nathi apha info@africarxiv.org.
I-COPE Council. Isikhokelo sokuziphatha kubahloli boontanga. NgoSeptemba 2017. | ipapashwe.org
Tennant, JP, Ross-Hellauer, T. Umda ekuqondeni kwethu uphononongo loontanga. Res yokudityaniswa koontanga5, 6 (2020). doi.org/10.1186/s41073-020-00092